अमृत जिन्दगी- कोसेली - कान्तिपुर समाचार
जिन्दगीको अमृत जिन्दगी मात्रै हो भन्ने सत्यबोध नगरेसम्म वा विज्ञानले जैविक रासायनिक चमत्कारमार्फत मानवजातिलाई स्थायी खुसीको उपहार नदिएसम्म आत्मघातको सिलसिला रोकिँदैन । त्यसैले प्रिय, तिमीले जन्मँदै बोकेर आएका अथाह सम्भावनाहरु अझै पनि ज्युँदै छन् । नपत्याए, एकपटक ऐनाअगाडि स्वयंसँग सोधी हेर ।
श्रावण १०, २०७७ राजन गोदार
प्रिय, तिमी मात्रै होइन, प्रत्येक नेपाली अवसाद बाँचिरहेछ । जीवनको अर्थहीनताले नबिथोलेको सायदै कोही छ । हरकोही तिमीजस्तै थकित छ, बेचैन छ । जिन्दगी, यसको अर्थ र अस्तित्वसँग तिम्रो मात्रै होइन, सबैको आ–आफ्नै सिकायत छ । विराट अस्तित्वले जति दिए पनि मान्छेको मन कहिल्यै भरिँदैन ।
मान्छेको जातै मगन्ते । हरक्षण उसले मागेकै जति चाहिएको छ । भिखारी शब्दले संसारका सबै मान्छेको वास्तविक थर बताउँछ । जस्तै, राजन भिखारी । मानवजातिको जैविक संरचनामै खोट छ । विज्ञानवाद भन्छ, मानव शरीरमा अनुभूतिअनुसार सेरोटोनिन र संवेदनायुक्त जैविक रसायन घोटाला भैरहन्छन् । तिम्रो मात्रै होइन, कैयनको मनमस्तिष्कमा आत्मघातको तरंग आउने–जाने भैरहन्छ । भलै तिमीलाई यी सबै कुरा शब्दमार्फत बुझाउन नसकुँला ।
मानवजातिको सामूहिक स्थायी खुसीको खोजमा अध्यात्म र विज्ञान आदिमकालदेखि ध्यानस्थ छन् । तर, घरघरमा डिप्रेसन छ । विश्वासको खडेरी नै यो डिप्रेसनको मुहान हो । घरभित्र होस् वा बाहिर विश्वास, भरोसा र सुरक्षाको कुनै प्रत्याभूति छैन । भावोत्तेजक व्याकुलता पोख्ने कुनै मान्छे/ठाउँ/संघसंस्था छैन । जनजनको मनमनमा बेचैनीको ज्वालामुखी छ, निकास छैन । लोग्नेस्वास्नी, सन्तति–अभिभावक, प्रेमीप्रेमिका, साथीभाइ, नातागोता, छरछिमेकी कसैलाई कसैको माया/भरोसा छैन । राज्यका निकाय वा निजी संघसंस्थाप्रति विश्वस्त हुन सक्ने सम्भावना छैन । अनिश्चितबाहेक सुनिश्चित केही छैन । समाजको छेउकुनाबाट समेत आडभरोसा लोप हुँदै छ । दिन प्रतिदिन अस्थिर मनोदशाको सिकार भैरहेको मान्छेको शारीरिक–मानसिक अनुशासन भताभुंग छ । सफलता जोख्ने थोत्रो मनोसामाजिक धर्मकाँटाले मान्छेलाई जिन्दगी बिर्साइदिएको छ । इन्टरनेट र स्मार्ट फोनका कारण मान्छेको अर्गानिक चेतनामा भाइरस पसेको छ । जोकोहीको मनमा ईर्ष्या चुलिएको छ । प्रत्येक श्वासप्रश्वासमा खुसी खोजिरहेको मानिस नानाथरी कुलतमा होमिएको छ । अनेकन कारणवश मान्छे शनैःशनै एकांगी हुँदै छ । र, आत्महत्या/आत्मघात नै निर्विकल्प समाधान मान्ने मूर्ख–ज्ञानीहरूको संख्या बढेको बढ्यै छ ।
हरेक मान्छे खुसीको पछाडि यति धेरै दौडिन्छ कि खुसी यदि व्यक्तिगत सवाल हुन्थ्यो भने यो धरामा बुद्धत्वबोध नगरेको कोही हुने थिएन । जिन्दगीप्रतिको कृतज्ञता र सन्तुष्टि निरपेक्ष रूपमा निजी मामला हुन्थ्यो भने कसैको जीवनमा पनि यो व्याकुलताको बास हुने थिएन । सामूहिक खुसी नै वैयक्तिक खुसीको कडी हो । एउटा व्यक्तिको खुसी अर्को व्यक्ति, त्यो समाज र राज्यको पनि कर्तव्य हो । मै खाऊँ, मै लाऊँवाला नार्सिसिस्टहरूको शासनमा राज्यसँग राखिने हरेक अपेक्षा अनुचित हुन्छ । सफलता जोख्ने धर्मकाँटा चोकैमा राखेर चियो गरिरहेको समाजसँग मानवीय संवेदनाको संवाद सम्भव छैन । र, कसैका खातिर कसैले आत्मोत्सर्ग गर्नेवाला छैन । जिन्दगीको अमृत जिन्दगी मात्रै हो भन्ने सत्यबोध नगरेसम्म वा विज्ञानले जैविक रासायनिक चमत्कारमार्फत मानवजातिलाई स्थायी खुसीको उपहार नदिएसम्म आत्मघातको सिलसिला रोकिँदैन । त्यसैले प्रिय, तिम्रो जिन्दगीको हली पनि तिमी, माली पनि तिमी, मालिक पनि तिमी । तिमीले जन्मँदै बोकेर आएका अथाह सम्भावनाहरू अझै पनि ज्युँदै छन् । नपत्याए, एकपटक ऐनाअगाडि स्वयंसँग सोधी हेर ।
परिस्थिति विकराल छ प्रिय । यदाकदा आत्मघाती सोचले तिमीलाई पनि जिन्दगीको भित्तासम्म धकेल्छ होला । खासै नयाँ कुरा होइन, न त यो तिम्रो मात्रै समस्या हो । जिन्दगीका घटना–दुर्घटनाले जन्माउने करोडौं प्रश्नहरूको जवाफ जिन्दगीसँगै छ ।
प्रिय अलबिदा, तिमी त आत्मघात गरेर गइगयौ । तर, तिमीले आत्मघात मात्रै गरेनौ । सकिनसकी जिन्दगानी बाँच्न खोजिरहेका तमाम जिन्दगीप्रति घोर अपमान गर्‍यौ । चरम निराशाले कोर्रा बर्साइरहँदा पनि आशाको उज्यालो पर्खिरहेका करोडौं जिन्दगीको धैर्यलाई गिज्यायौ । जिन्दगीको डिलमा उभिएर आत्महत्या ताकिरहेका लाखौं जिन्दगीलाई उक्सायौ । मिल्थ्यो भने, उक्साएको मुद्दा ठोकेर तिम्रो आत्मालाई कहिल्यै मुक्ति नपाउने गरी युगपर्यन्त कैदमा कोच्न मन थियो ।
हरदिन लाखौं मान्छेले अनेकन कारणवश जिन्दगी गुमाउँछन् । बुढ्यौली, रोग, भोक, नशा र घटना–दुर्घटनाले मान्छेका जिन्दगी सक्काएकै छ । युद्ध, राजनीति, धर्म, विपत्ति, कुलत र हत्याजन्य अपराधका कारण पनि मान्छेले जिन्दगी गुमाएकै छन् । अर्बौंको आवादीमा दुई–चार लाखको आत्महत्याले केही फरक पार्दैन । फरक त्यतिखेर पर्छ, जब मान्छे कहिल्यै मर्नै सक्दैन ।
आत्मघातीहरूको अंश सानो छ । तिमीजस्तै आत्महत्याराहरूका नाममा चिन्ता–चिन्तन गर्नॅ बेकारको कुरा हो । बुढ्यौली र आत्महत्याबाहेक मृत्युका अरू सबै कारणमाथि केही गर्न सके समग्र मानवजातिको हित हुन्थ्यो ।
तर, अनमोल जिन्दगीहरूले कौडीको भाउमा अलविदा भनिरहेको देख्दादेख्दै, जिन्दगीलाई सोझै इन्कार गरेको हेर्दाहेर्दै तिम्रोजस्तै मनोदशामा बाँचिरहेका जिन्दगीहरूको मायाले बेचैन छु म । सत्य बोल्नुपर्छ, माया तिनको लागेको हो जो आत्महत्याउन्मुख छन् । आत्मघाती मनोदशा बोकेर जिन्दगीको डिलमा छन् ।
किन कसैले आत्महत्या गर्‍यो भन्ने विषय कल्पनातीत हुँदो रहेछ । कस्सम, फेरि बाँच्ने ग्यारेन्टी हुँदो हो त म एकपटक आत्महत्या गरेर हेर्न चाहन्थेँ । आत्महत्याका बारेमा पढेर, सुनेर, जानेर कहिल्यै नसकिने सामग्री छन्, जीवनको तनाव र त्यसले जन्माउने भावावेग । नानाथरीका मानसिक गडबडी/विचलन । जैविक रासायनिक क्रिया–प्रतिक्रिया । संवेदनाजन्य सनसनी । नशाजन्य लत कुलत । जिन्दगीप्रतिको वितृष्णा । खाद्य अनुशासन । आत्महत्या गर्नेभन्दा पनि भैजाने विषय हो । आत्महत्या न भैजान्छ न त गरिन्छ नै, आत्महत्या गराइन्छ । राज्य, समाज, व्यक्ति मिलेर आत्महत्या गराइन्छ अनि गरिन्छ र त्यसपछि भैजान्छ । हरेक मान्छे एकआपसमा अतुलनीय छन् । आत्महत्याको कारण पनि उत्तिकै वैयक्तिक हुन्छ । आदि इत्यादि । खैर, कसरी मान्छे आत्मघातको मनोदशासम्म पुग्छ भन्ने कुरा चर्चा गर्न सकिएला तर त्यो एक टुक्रा समयमा मान्छेको मनमस्तिष्कभित्र मच्चिने उपद्रव भने सधैं शोधको विषयमै सीमित रहला ।
सरसर्ती हेर्दा यी पाँच कारण कारक तत्त्व हुन सक्छन्— सम्पत्ति, सम्बन्ध, सफलता, स्वास्थ्य र स्वभाव । र अर्को, अकारण । कुनै पनि कारण अर्कोभन्दा कमजोर छैन । कारण जेसुकै होस्, आत्महत्याले लक्षित गरेको उद्देश्य एउटै हुन्छ : सुख/मुक्ति । मुक्ति शरीरजन्यभन्दा पनि आत्माजन्य चीज हो । भोग्नै नपाइने सुखको तृष्णाले जन्माउने जिन्दगीप्रतिको वितृष्णा र त्यसकै कारण गरिने आत्महत्या दुवै अर्थहीन छन् ।
सोच, प्रक्रियाका कुरा अलग छन् । जुनसुकै सूत्र/शास्त्र, ज्ञानविज्ञान लगाएर पनि आत्महत्याको रहस्य पहिल्याउन सकिँदैन किनभने आत्महत्या अकारण हुन्छ । जान्नेहरू दाबी गर्छन्, सुसाइड नोट कानुनका लागि प्रमाण हो तर त्यही नोटबाट कदापि त्यो तात्कालिक मनोदशाको कारण पत्ता लाग्दैन ।
प्रिय अलबिदा, तिमीले किन त्यसो गर्‍यौ भनेर अन्दाज मात्र लगाउन सक्छु । जुन विषय अन्दाज मात्रै लगाउन सकिन्छ, च्याँखे थाप्न मात्रै सकिन्छ, त्यस विषयमा घोरिनु झुर काम हो । तर, हरेक दिन उस्तै खबर ठोक्किन आइपुग्छ । अनि बेचैनी उम्लिन्छ । मुखमा आएजति गाली बर्बराउँछु । अनमोल जिन्दगीको अवमूल्यन गर्नेहरू सम्झँदा रिसले शरीर पूरै थर्थर–थर्थर काँपिरहन्छ । आवेगको यो आगो आँखाबाट ननिस्कुन्जेल आकुलव्याकुल हुन्छु ।
रिस मरेकै क्षण तिमीजस्तै सबैको माया लागेर आउँछ । सोच्छु, सोध्छु— कस्तो संवेग र भावावेशको सम्मोहनमा परिगयौ ? जिन्दगीले तिम्रो मुटुमा कस्तो गाँठो पार्‍यो जसलाई फुकाउन जीवनकै घाँटी रेट्यौ ? जुन भावावेग टाउकोमा सवार भयो, त्यसको तयारी कसरी भयो ? कसले गरिदियो ? त्यो मनोदशा कसले हुर्काइदियो ? आखिर के थियो त्यो ? एक टुक्रा समयमा जिन्दगीको तनावले सिर्जेको एक टुक्रा आवेग ? एकक्षणको लाचारी वा चरम निराशा ? जिन्दगीको पीडा भुलाउन खोजेको पेनकिलर ? क्षणभंगुरको मनोवैज्ञानिक विकार ? गुम्सिएको भावनात्मक दबाब ? दोष लगायौ कि रिस पोख्यौ ? साहस थियो कि दुस्साहस ? शक्ति थियो कि कमजोरी ? शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक कुन असफलता थियो ? स्वयंलाई बोझ सम्झियौ, अरू कसैका लागि ? तिमीले आत्मघात गर्‍यौ कि जिन्दगीको अर्थहीनता आत्मसात् गर्‍यौ ? जे होस्, त्यो एक टुक्रा समय, त्यो क्षणभंगुरको आवेग मान्छेले पहिल्याउन नसकेको बूढो जर्जर रहस्य हो । तर्क–कुतर्कको वादविवाद सायदै टुंगिएला ।
खैर, यो कुनै ठूलो कुरा भएन । महत्त्वको कुरा त यो भयो कि तिमीले असंख्य मानिसलाई यो प्रवृत्ति सारेर गयौ । कैंयन मानिसलाई आत्मघाती निर्णय गर्न हौस्याएर गयौ । जिन्दगीसँग खेलाँची गर्न सिकाएर गयौ । जिन्दगी अर्थहीन छ भन्ने गलत पाठ पढाएर गयौ । उसले त गर्‍यो, मैले किन नगर्ने भन्ने गलत मानसिकताको बीउ रोपेर गयौ । जाँदाजाँदै तिमीले आमसञ्चारका लागि टीआरपी बढाउने ट्याब्लेट दिएर गयौ । गजब छ, यहाँ आत्महत्या बडो सनसनी खबर बन्छ । अनि हिजोआज आत्महत्या सरुवा रोगजस्तै भैगएको छ ।
प्रिय, जिन्दगी तनावैतनावको खानी हो । जिन्दगीको बहीखाता पल्टाई हेर । सुखदुःखको जोडघटाउ गर । अपेक्षा र नतिजा, चाहना र यथार्थ, योजना र सफलता, मिलन र विछोडको लेखाजोखा गरिहेर । जिन्दगीको समग्रता भनेकै दुःख हो । तर, यसको मतलब यो होइन कि जिन्दगीमा सुखचैन छँदै छैन । मान्छे आफूसँग भएका सुखचैनको बीउ मास्दै छ । दुःख, बेचैनी, कष्ट, तनाव फलाउने/फुलाउने बीउ रोपिरहेको छ । अस्तित्वको नियम तिम्रो मेरो इच्छा आकांक्षाले चल्दैन । जिन्दगीको सर्वोत्कृष्ट गीत अविराम संघर्ष हो । जीवलोकको नियममा जीवन र मरण स्वचालित छ । तिमी हामी फाँक्कैमा हतार गर्छौं । जन्मँदा अमृत लिएर जन्मेको मान्छे हरेक पल विषैविषको ओभरडोजले विषालु भैगएको छ । मान्छे हिजोआज मानवीय छैन, यान्त्रिक र रासायनिक भैगएको छ । तिम्रो मेरो ज्ञानेन्द्रियले विभिन्न भोक मेटाउन जिन्दगीको अनिवार्य ज्ञान/नियम बिर्सेको छ । तिम्रो मेरो अनेकन हल्लाखल्लामा जिन्दगीको मीठो धुन पातलिँदै गएको छ । कवाडी समाजले परिभाषित गरिदिएको सफलताको भुलभुलैयाभित्र सुखानुभूति खोजिरहेछौं । जिन्दगी र पैसाबीचको अनुचित साँठगाँठमा जीवनका अकाट्य सत्यहरू खरानी भएका छन् । सफलताको कुलतले जिन्दगीको सुन्दर अनुहारमा कालो पोतिसकेको छ ।
भीम विरागको यो गीत सुनी हेर त एकपटक ।
फूलैफूल मात्र पनि होइन रैछ जीवन
काँडाबीच फुल्ने फूल रैछ जीवन...
विषैविष मात्र पनि होइन रैछ जीवन
रहर गर्नु मात्रै पनि होइन रैछ जीवन
मुस्कान र आँसुको संगम रैछ जीवन
प्रिय, जिन्दगीको आकस्मिक अवतरण भएपछि अर्बौं–अर्ब जिन्दगी एउटा आशातीत अन्तरालमा छन् । यस ट्रान्जिटमा अर्बौं जिन्दगी अलपत्र छन् । अर्बौं उदास जिन्दगीका आँखाबाट खर्बौं सपना बगिसके होलान् । अर्बौं हतास मनभित्र खर्बौं गुरुयोजनाका खर्बौं–खर्ब चिहान बनिसके होलान् । जिन्दगी पुरानैमा लयबद्ध गर्न मै हुँ भन्नेहरूले समेत हार खाइसके होलान् ।
जिन्दगीको नयाँ लय कम्पोज गर्न त समय लाग्छ नि प्रिय । सत्य हो, जिन्दगी छोटो छ । तर, पुरानो र नयाँबीचको यो ट्रान्जिट जिन्दगीभन्दा लामो अवश्य छैन, थिएन । आ–आफ्नै रफ्तारमा जिन्दगी अविरल बगिरहेका थिए । फेरि पनि बगिरहन्छन् ।
जहिलेदेखि तिम्रो मेरो जिन्दगी तमाम नाफाघाटा र जोडघटाउको राजमार्गमा प्रवेश गर्‍यो, त्यतै कतै फसिगयो । जिन्दगीको देखिने पाटोबाहेक कुनाकाप्चा–अन्तरकुन्तर कहिले सजायौं ? तनमनको विकार मोचन कहिले गर्‍यौं ? आफ्नै सास, आस र वैराग्यको साक्षी बस्ने छुट्टी कहिले मिल्यो ? फुर्सद नै थिएन, जो आज मिलेको छ । तसर्थ यो ट्रान्जिट आशीर्वाद पनि हो । तिमीले भित्रैसम्म नछामेर पो त, जिन्दगीको मादकतामा यो कुरूप अनि कहालीलाग्दो अन्तराल पनि सुन्दर छ, मादक छ । प्रिय, तिमीले सराप मात्रै बुझ्ने गल्ती गरिदियौ भने लाखौंलाख जिन्दगीले बाटो बिराउन सक्छन् । तिमी, छैन को पछाडि अन्धाधुन्ध भाग्न थाल्यौ भने तिमीसँग भएको पनि बिर्सिजान्छौ । जे छैन, छैन ।
मृत्युचेतले ओतप्रोत मिस्टर नगरकोटीलाई हिजोआज मान्छेको आत्महत्याले त्यति छुँदैन । तपाईंले मिस्टर नगरकोटीलाई किन मान्छेले आत्महत्या गर्छ भनेर सोधिहाल्नुभयो भने जवाफ यस्तो आउँछ ः किन गर्छन्, नगरी थाहा हुँदैन । द फ्रैक्सन अफ टाइम इज अ टोटल मिस्ट्री । बाँच्नु एक डिस्गस्टिङ लत हो, सारा अस्तित्व एक एडिक्सन । सही हो । विज्ञानले जैविक रासायनिक गडबडीका केही सूत्र सिद्ध गरे पनि आत्महत्याको तात्कालिक मनोदशा मनोविज्ञानले पहिल्याउन नसक्ने रहस्य हो । आत्महत्या जैविक घोटाला हो कि मानसिक विचलन भन्ने प्रश्नको कुनै स्पष्ट जवाफ भेटिँदैन । मान्छेको शरीरभित्र सोचअनुसारको रासायनिक प्रतिक्रिया घट्छ, जसले जैविक सनसनी मच्चाउँछ र जैविक सनसनीले रासायनिक घोटाला हुन्छ । त्यही घोटालामा हुन्छ, जे जे हुन्छ । मानव शरीरको मानसिक र जैविक सन्तुलन आफैंमा अर्को पहेली हो ।
प्रिय, बिन्ती छ, जिन्दगी नचाहेर पनि बाँच्नैपर्छ भन्ने छैन । तिमी यहाँ हुँदा कसैलाई केही फरक पर्छ भन्ने लाग्दैन भने यहाँबाट जानुभन्दा अगाडि फरक पारेर जाऊ, जाँदाजाँदै एउटा कृपा गरेर जाऊ । तिम्रो अधिकारले भ्याएजति, तिम्रो सामर्थ्यले सकेजति र तिम्रो वशमा भएजति सबै दान दिएर जाऊ । शरीरका सबै अंगप्रत्यंग, धनसम्पत्ति, ज्ञान, विवेक, अनुभव जे–जे सम्भव छ, सबै बाँच्न चाहनेहरूलाई उपहार दिएर जाऊ । कैयनले गीतसंगीत पढेका छन् तर सुन्न सकिरहेका छैनन् । तिनलाई तिम्रा एक जोर कान दिएर जाऊ । कैंयनले चन्द्रसूर्य सुनेका छन्, देखेका छैनन् । तिनलाई तिम्रा एक जोर आँखा दिएर जाऊ । कैंयन सिरोसिसका बिरामी अस्पतालमा तड्पिरहेका छन्, तिनलाई तिम्रो एक थान फोक्सो, कलेजो दिएर जाऊ । मिर्गौला फेल भएको मान्छेका लागि तिम्रा एकजोडी मिर्गौला दिएर जाऊ । जस–जसले तिम्रा अंगप्रत्यंगको उपभोग गर्लान्, जाँदाजाँदै तिनका लागि ईश्वर बनेर जाऊ । तिनलाई जिन्दगीभर तिमीप्रति अनुगृहीत बनाएर जाऊ । यति गरिदिएर मलाई पनि मृत्युपर्यन्त तिम्रो ऋणी बनाएर जाऊ ।
जिन्दगी जिन्दगीजस्तै सुन्दर बाँचेर जाऊ । एकबारको जिन्दगी भरपूर मज्जा लिएर जाऊ ।
-लेखक करिअर काउन्सिलर हुन् ।
@RajanGodar प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ १३:२४
वास्तविक महानायक वा नायिका आफै जन्मिन्छ । ऊ पूर्वी क्षितिजबाट सुन्दर–कुरूप, महिला–पुरूष वा विशाल जनावर, जुनसुकै रुपमा आउन सक्छ । ऊ आफ्नै समयमा आउँछ । हामीले पर्खिनु–नपर्खिनुको कुनै अर्थ छैन ।
श्रावण १०, २०७७ अरुण गुप्तो
मोरिस ब्लान्सो त्यो एक्लोपनलाई घाउसँग जोड्छन् । ‘एकाकीपन एक प्रकारको आत्मवार्ता हो,’ उनी भन्छन् । त्यही आत्मवार्ताले घाउ बनाउँछ । र, त्यसको रनाहाले पूरै युगलाई डोहोर्‍याउन सक्ने ज्ञान र चेतनाको प्रादुर्भाव गरिदिन्छ । जसले त्यो उज्यालोको दर्शन पाउँछ, ऊ दार्शनिक कहलिन्छ । ऊ नै सच्चा नायक ठहरिन्छ ।
जीवनबारेको दुःखान्त परिदृष्टि पनि हो यो । दुःखबाटै ज्ञान जन्मिन्छ । तर, आजको अगुवाले यो सत्यको दार्शनिक तत्त्व आत्मसात् नै गर्न सक्दैन । त्यसैले ऊ नायक पनि बन्न सक्दैन । महानायक त झन् दुर्लभ ।
वर्ड्स वर्थले ‘टिन्टर्न एबे’ कवितामा संसारलाई हेर्ने प्रबुद्ध परिदृष्टिको चर्चा गरेका छन् । उनी बेलाबेला निःशब्दता, निश्चलता अनि मानवताको दुःखको गीत सुन्ने आत्मज्ञानको कुरा गर्छन् । तर, आजको सन्दर्भमा यो कुरा हास्यास्पद हुन जान्छ । मानवताको गीत सुन्नु त निकै परको कुरा । दुःखको भौतिक व्याख्या मात्रै गर्छौं हामी ।
नायक वा नायिकाका अगाडि दुइटा परिस्थिति हुन्छन् । एउटा, समयको द्वन्द्व । अर्को, त्यो द्वन्द्वलाई बुझेर प्रतिक्रिया दिनु । उनीहरू त्यो समयसँग सधैं हारेका हुन्छन् । तर, उनीहरू फेरि पनि लडिरहन्छन् । प्रतिक्रिया जनाइरहन्छन् । एक दिन छोरीले भनिन्, ‘नायिकाले संसारलाई एउटा सुविधाजनक विन्दुबाट हेरेकी हुन्छिन् । त्यहाँबाट उनले सम्पूर्णता देख्छिन् वा नदेख्न पनि सक्छिन् ।’ तर, सम्पूर्णताको कामनाले दम्भ जन्माउँछ । मलाई लाग्छ— त्यसैले गर्दा नै नायक असफलतापछि पनि चेष्टा गर्न छाड्दैन । बुद्धको अन्तिमको शान्ति, गान्धीको असफलताले हामीलाई निरन्तर लडिरहने दर्शन सिकाएको छ ।
सेलेब्रिटीको आफ्नै सुन्दरता हुन्छ । ऊ फिल्म, खेल, राजनीति वा अरू जुनसुकै क्षेत्रबाट पनि हुन सक्छ । सेलेब्रिटीले एउटा कुनै क्षेत्रमा प्रभाव पार्छ । सोसल मिडियामा उसका फलोअर प्रशस्तै हुन्छन् । तर, उसमा युग परिवर्तन गर्ने चाहना हुँदैन र सक्दैन पनि ।
हजारौं मानिस शाहरूख खानको घरअगाडि उभिन्छन् । उनलाई एक झल्को देख्न पाउँदा खुसी हुन्छन् । युट्युबमा सद्गुरुको राम्रो प्रवचन सुन्न पाइन्छ । हरिवंश आचार्यहरू नेपालका ‘पप आइकोन’ हुन् । उनीहरूबाट रमाइला र सुन्दर कुराहरू हेर्न–सुन्न पाइन्छ । सन्दीप लामिछानेले विकेट लिनासाथ नेपालीत्वको भावना सञ्चार हुन्छ । चिन्ता, दुःख, द्वन्द्वका बीचमा सेलेब्रिटीले सुख प्रवाह गरिदिन्छन् । अहिलेको मिडिया यस्तै सेलेब्रिटी परम्पराको पछाडि छ । यो परम्परामा नायक जन्मने विचार मात्रै पनि अर्थहीन हुन पुग्छ ।
हामीलाई महाकवि, युगपुरुष, महानायक बन्ने–बनाउने अनन्त इच्छा छ । महापुरुष बनाउने प्रयासमा कसैलाई तक्मा पहिर्‍याइदिन्छौं, माला पनि लगाइदिन्छौं । तर, हामी नायक पुरुषलाई मात्रै बनाउँछौं । पुरुषत्वमा मात्रै नायक खोज्छौं । बिर्सन्छौं, नायक बन्ने प्रयासमा महाभारतका अर्जॅनले पनि बृहन्नला बन्नुपरेको थियो । यो एउटा रूपक हो । अर्जॅनलाई पूर्ण स्त्री बन्न सम्भव थिएन । त्यसैले उनी अर्ध स्त्री र अर्ध पुरुष स्वरूपमा रहे । सम्पूर्ण पुरुष स्वरूपका भीष्म, कर्ण, दुर्योधनहरू उनीसँग हारेर गए । अर्जुनको चरित्रका पछाडि कृष्णको नारीत्व र पौरुष दुवै थियो । कृष्णले राधाको संसर्गमा नारीत्वको अन्तरीकरण गरेका थिए । उनको पहिलेकै मोहिनी अन्तःचरित्र कहाँ जान्छ र ? शिवको पनि नारी–चरित्र छ । अर्धनारीश्वरका रूपमा पर्वतीको गुण छ ।
क्राइस्टलाई पनि मध्यकालका दर्शनिक हेनरी सुसो नारी रूपमा प्रेम गर्थे । उनी क्राइस्टमा नारीत्व पनि देख्थे । चर्चले उनलाई धम्की दिएर चुप लगाएको थियो । नायक अथवा महानायकले समाजलाई समग्रताको परिधिमा समेटेको हुन्छ । समेट्न नसकियुन्जेल त्यसका लागि चेष्टा गरिरहन्छ । वास्तवमा चेष्टा नै सफलता हो । नायकको परिधि भूगोलदेखि इतिहाससम्म, चेतना परिवर्तनदेखि साहित्य र अन्य क्रियाकलापहरूसम्म, विकासको सोचदेखि वैज्ञानिक चेतसम्म विस्तारित हुन्छ । उसले आफूलाई अनन्त भविष्यसम्म युगले सम्झिरहने बनाउँछ । ऊ जोन अफ आर्क, गान्धी, मार्टिन लुथर किङ, मन्डेलाजसरी समयको निरंकुशताबाट जन्मिन्छ ।
अहिलेको समाजमा आहुति, त्याग वा बलिदानीको संकट छ । समाजका लागि आफूलाई शारीरिक र मानसिक यज्ञमा होम गर्नु नै आहुति हो । त्यो एउटा छटपटीग्रस्त अशान्त मनको चाहना हो । हामी जोकोहीमा यस्तो मन हुँदैन । यस्ता नायक–नायिका हराइसकेका छन् ।
मिथकशास्त्री जोसेफ क्याम्पबेल एउटा कथा भन्छन्— अफ्रिकाको एउटा जनजातिमा वीर छनोट गर्न दुईबीच युद्ध गराइन्थ्यो । मृत्यु वरण गर्नेले वीरको उपाधि पाउँथ्यो । तर, विडम्बना दुवै जना जितकै लागि युद्ध गर्थे । त्यो युद्धमा मृत्यु वरदान हुन्थ्यो । यस्तो कथालाई शाब्दिक अर्थमा मात्रै लिनु हुँदैन । आहुतिको भावनाले आध्यात्मिक शक्ति प्रदान गर्छ । व्यक्तिको सांकेतिक मृत्यु (जुन असल मृत्युभन्दा गाह्रो हुन्छ) ले नायकलाई जन्म दिन्छ । आहुति, मृत्यु, शुद्धि बुझ्न त न हामीसँग समय छ न इतिहास नियाल्ने रुचि ।
राजनीति र युद्धका कथा समेटिएका संसारका महाकाव्यहरूमा नायकको अन्तर्मनको चाहना हुन्छ— देउता बन्ने । फिलिप्पे सेल्लिए यसै लेख्छिन् । सिजर र नेपोलियनको पनि यस्तै चाहना थियो । केही नायक त कुनै पनि बन्धन मन पराउँदैनन् । उनीहरू ईश्वरलाई पनि घृणा गर्छन् । जोन मिल्टनको महाकाव्य, ‘प्याराडाइज लस्ट’ मा एक देवदूत मम्मोनले भनेको सम्झन्छु— मुक्त, कसैको उत्तरदायित्वबिना सजिलो गुलामी, भक्तिको लगामरूपी वैभवभन्दा परिश्रमी स्वाधीनताको चाहना ।
हिरो अथवा क्रान्तिकारीको चाहनामा क्रूरता पनि हुन्छ । आफैंप्रति क्रूर हुनु एक प्रकारको नायकी विशेषता हो ।
आदर्श मिथकीय हिरोको जन्म असाधारण हुन्छ । जस्तै : बुद्ध र क्राइस्ट । एक जना सामान्य परिवारमा जन्मिए त अर्का राजपरिवारमा । वैभव र दरिद्रताबाट हिरोको जन्म महाकाव्यीय रचनात्मकता हो । बुद्ध र क्राइस्ट त्यसैले युगनायक हुन् ।
महा, युग, कालपुरुषजस्ता विशेषण जोकोहीलाई जोड्नु यी शब्दकै अपमान हो । यस्ता शब्दले इतिहास बोकेका हुन्छन्, जसमा विशेष अर्थ समाहित हुन्छ । म पाँचवटा किताब लेख्दैमा अन्तर्राष्ट्रिय लेखक बन्दिनँ । केही रचना गर्दैमा महिमामय व्यक्तित्व हुँदिनँ म ।
को महापुरुष, को युगपुरुष अनि को कालपुरुष हो, इतिहासले आफैं निर्धारण गर्छ । स्वनिर्मित प्रतिष्ठाले नायकत्व स्थापित गर्न सक्दैन । मलाई यहाँ सेक्सपियरको नाटक ‘ओथेलो’ को खलनायक इआगोको सम्झना हुन्छ । ऊ भन्छ— प्रतिष्ठा एउटा अकर्मण्य र अति मिथ्या हो, साधारणतः बिनायोग्यता को पाइन्छ ? प्रतिष्ठाको लायक नहुँदै लुप्त पनि हुन्छ, त्यसैले तिमीले केही प्रतिष्ठा गुमाएका छैनौं ।
नायक चिन्न सजिलो छैन । नायकको भेषमा इआगो पनि त आउन सक्छ । बुद्धिमान खलनायक हो इआगो । उसको मन्द हाँसोबाट बच्न सक्नुपर्छ । यही बेला मलाई अर्को प्रसंग याद आउँछ । धेरै वर्षपहिले केन्द्रीय अंग्रेजी विभागको प्रसंग । अभि सुवेदी सर आत्तिँदै आएर भन्नुभयो, ‘मलाई बचाऊ ।’
हुन त यसरी आउनु उहाँको तरिका नै हो, जो हामीलाई निकै मन पर्छ । मैले उत्सुक हुँदै सोधें, ‘के भयो सर ?’
उहाँले भन्नुभयो, ‘एक जना विद्यार्थीले ममाथि थेसिस लेख्ने रे, तिमी जसरी पनि उसलाई अरू कुनै टोपिक देऊ ।’ म अलेक्जेन्डरको घोडामा बसेझैं गरी ती विद्यार्थीलाई खोज्दै पुगेँ । अनि भनेँ, ‘ल तिम्रो थेसिसको टोपिकमाथि छलफल गरौं ।’
उनले जवाफ दिए, ‘छलफल के गर्ने सर, म त द माइन्ड अफ प्रोफेसेर डाक्टर अभिनारायण सुवेदीमाथि थेसिस लेख्छु ।’
हामी नयाँ बिल्डिङको एउटा क्लासमा थियौं । मैले सोधें, ‘अनि यो विषयमा तिमीले के–के अनुसन्धान गर्‍यौ, पाठ के–के छन् ?’ उनले भने, ‘मेरो र साथीका क्लासका नोटहरू ।’
उनलाई सम्झाएँ, ‘यो विषय गम्भीर छ । एमए थेसिस होइन, पीएचडीका लागि उपयुक्त छ, अहिले कुनै उपन्यासमा लेख, पछि सरको माइन्डमा काम गर्ने ।’ बल्ल उनी कन्भिन्स भए । अनि समोसा खान गए । म कालु पाँडेजसरी शानले अभि सरको कोठामा पुगेँ । उहाँले अहिले पनि त्यो कुरा बिर्सनुभएको छैन । सरको त्यो डर इआगोले पहिल्यै भनिसकेको छ ।
फेरि नायक–नायिका बनाउनु र जोकर बनाउनुमा धेरै फरक हुँदैन । जोकरको बेग्लै व्यक्तित्व पनि हुन्छ । उसको आफ्नै गम्भीरता पनि हुन्छ । नायक र जोकर दुवैका वैयक्तिक गुण हुन्छन् । नायक र जोकरको एक अन्तर्निहित व्यथा पनि हुन्छ । नायकले समाज, विश्वलाई अगाडि जान प्रेरित गर्छ तर आफू एक्लो हुन्छ । जोकर पनि अरूलाई हँसाउँछ, आफू एक्लै हुन्छ ।
आहुति, होम्, परित्यागको तथ्य आज सामाजिक संकट भएको छ । आहुतिमा थोरै मात्र भूल भयो भने ग्रीक वीर हेराक्लेसलाई जस्तो अन्याय हुन सक्छ । रेने गेरार्द ‘सेक्रिफिसल क्राइसिस’ मा लेख्छन्— हेराक्लेस लामो कालपछि आफ्नो सहर फर्किंदा उनका श्रीमती र सन्तानलाई दुष्ट लाइकुसले हत्या गर्न लागिरहेको थियो । तर, हेराक्लेसले त्यसअघि नै लाइकुसलाई मारिदिन्छन् । पछि आफूलाई शुद्ध पार्न हेराक्लेस आफ्नै आहुति दिन तयार हुन्छन् । तर, त्यही दबाबमा उनी पागल हुन पुग्छन् र आफ्नै पत्नी–सन्तानलाई शत्रु ठानेर बलि दिन्छन् ।
हेराक्लेसको यो भयानक समस्या आज हाम्रैबीच मञ्चन भइरहेझैं लाग्छ । हाम्रा नेताहरू पनि हेराक्लेस जसरी नै सहर आएर आफ्नै जनताको बलिदान दिँदै छन्जस्तो लाग्छ । यस्तोमा ‘हेराक्लेस’ हरू सहर फर्कनुको के अर्थ !
आज न आहुतिको भावना छ न त नायक । छ त केवल मिडिया, माला अनि स्तुति । खासमा यिनै चीज नायक निर्माणका बाधक पनि हुन् । कसैले कसैलाई अक्षरहरूको पगरी गुथाइदिँदैमा ऊ नायक हुँदैन । हो, कसैलाई ऊ नायक भएको भ्रम भने गराइदिन सक्छ ।
वास्तविक नायक त आफैं जन्मन्छ । ऊ पूर्वी क्षितिजबाट सुन्दर–कुरूप, महिला–पुरुष वा विशाल जनावर, जुनसुकै रूपमा आउन सक्छ । ऊ आफ्नै समयमा आउँछ । हामीले पर्खिनु–नपर्खिनुको कुनै अर्थ छैन ।
प्रकाशित : श्रावण १०, २०७७ १०:४०